Isku-duubista Shabakadaha Python iyo BeautifulSoup
Waxaa jira macluumaad badan oo ku filan internetka oo ku saabsan sida loo jaro bogagga internetka iyo blogs si sax ah. Waxa aan u baahannahay ma aha oo keliya helitaanka xogtaas laakiin hababka la iskudhin karo oo loo ururiyo, loo falanqeeyo lana abaabulo. Python iyo BeautifulSoup waa laba qalab oo cajiib ah si loo xoqo boggaga internetka iyo soo saarida xogta - white yacht master. Daarista webka, xogta si fudud ayaa loo soo saaraa oo lagu soo bandhigaa qaab aad u baahan tahay. Haddii aad tahay maalgaliye niyadjab leh kaas oo qiimeeya waqtigiisa iyo lacagkiisa, waxaad hubaal ahaan u baahan tahay in la dedejiyo geedi socodka shabakadda oo ay ka dhigto mid la yareeyo sida ay noqon karto.
Waxaan isticmaali doonnaa labada Python iyo BeautifulSoup labadaba luuqada ugu muhiimsan.
1. Isticmaalayaasha macmiilaha, Python waxaa lagu dhajiyay OS X. Waa inay furaan Terminal iyo nooca python -version . Sidan, waxay awoodi doonaan inay arkaan Python 2.7 version.
2. Isticmaalayaasha Windows, waxaan kugula talineynaa in lagu rakibo Python iyada oo loo marayo goobta rasmiga ah.
3. Marka xigta, waa inaad gashaa maktabad qurxan oo leh maktabad quruxda leh. Qalabkan maareynta xirmooyinkaas ayaa gaar ahaan loogu sameeyey Python.
mashiinka dhejinta BeautifulSoup4
Xeerarka ugu muhiimsan ee aad u daryeesho waa:
1. Waa inaad fiirisaa qawaaniinta iyo xeerarka goobta ka hor inta aanad bilaabin soo noqoshada..Sidaas darteed aad u taxaddar!
2. Waa inaadan ka codsanin xogta ka imanaysa goobaha si aad u daran. Hubi, qalabka aad isticmaashid wuxuu u dhaqmaa si macquul ah. Haddii kale, waxaad jebin kartaa goobta.
3. Hal dalbasho midkii labaad waa habka saxda ah.
4. Dhismaha barta ama bogga waa la bedeli karaa wakhti kasta, waxaana laga yaabaa inaad dib ugu noqoto goobtaas oo aad dib u qorto koodhkaaga marka aad u baahato.
Kursigaaga kore ee bogga qiimaha si aad u fahamto waxa la qabanayo. Akhri qoraalka la xidhiidha HTML iyo Python labadaba, iyo natiijooyinka, waxaad ku arki doontaa qiimaha gudaha tagsiyada HTML.
Tilmaamyada HTML waxay inta badan yimaadaan qaabka
Ku dhoofinta Excel CSV
Markaad soo qaadato xogta, tallaabada xigta waa inaad ku keydiso goob-joog. Excel Comma Separated Format waa xulashada ugu fiican ee arrintaan, waxaad si sahlan u furi kartaa xaashidaada Excel. Laakiin marka hore, waa inaad soo dejisid Module Python CSV iyo modules taariikhda-taariikhda si aad u diiwaangeliso xogtaada si sax ah. Qodobbadan soo socda ayaa lagu dhejin karaa qaybta soo dejinta:
laga bilaabo dhoofinta datetime ilaa datetime )
Soodajinta Horumarinta Sare
BeautifulSoup waa mid ka mid ah qalabka ugu fudud uguna dhammeystiran ee shabakadda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahato inaad soo ururiso tirooyinka badan ee xogta, tixgeli qaar ka mid ah bedelaadaha kale:
1. Khariidadu waa qaab awood leh oo la yaab leh.
2. Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa koodhka API-ga. Waxtarka xogtaada ayaa muhiim ah. Tusaale ahaan, waxaad isku dayi kartaa Google Graph API, kaas oo ka caawiya inuu qariyo xogta oo aanu ku tusin boggaga Facebook.
3. Ka sokow, waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada dhabarka ah sida MySQL oo ku kaydi xogta tiro aad u badan oo sax ah.
4. KAABKA wuxuu u taagan yahay "Ha isku Diidin" adiguna waxaad isku dayi kartaa in aad baabi'iso hawlaha joogtada ah adoo isticmaalaya farsamadan.